Kumannaan shaqaalaha dowladda Mareykanka oo muddadii ugu dheereyd mushaar la`aan ah | Aftahan News
Kumannaan shaqaalaha dowladda Mareykanka oo muddadii ugu dheereyd mushaar la`aan ah
Hargeysa (Aftahannews)- Waxaa maalintii 22-naad mushaar la`aan ah boqollaal kun oo ka tirsan shaqaalaha dowladda Mareykanka, tan oo noqoneysa muddadii ugu dheereyd ee ay shaqaalaha dowladda mushaar la`aan noqdaan.
Dowladdii madaxweyne Bill Clinton, intii u dhaxeysay sanadihii 1995-96, muddo 21 maalmood ayay shaqaalaha dowladda mushaar la`aan ahaayeen.
Dimuqraaddiyiinta ayaa diiday codsigiisa ku aaddan $5.7bn (£4.5bn).
Maalintii shalay ahayd, shaqaalahaas – oo ay ku jiraan ilaalada xabsiyada, shaqaalaha garoomada diyaaradaha iyo shaqaalaha Hay`adda Sirdoonka Mareykanka – ayaanan helin mushaarkoodii ugu horreeyay sanadka.
Dhanka kale, madaxweyne Trump ayaa sheegay in laga yaabo inuu ku dhawaaqo xaalad degdeg ah si uu u helo lacagta uu doonayo. Wuxuu xusay in qorshaha derbiga uu ka mid ahaa waxyaabihii uu ballan qaaday intaan la dooran kahor.